ငယ်ငယ်တုန်းကလို ပေါ့ အပျင်းပြေဖတ်ကြည့်ရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငယ်ငယ်တုန်းကလို ပေါ့ အပျင်းပြေဖတ်ကြည့်ရအောင်
ငယ်ငယ်တုန်းကလို ပေါ့ အပျင်းပြေဖတ်ကြည့်ရအောင်
Posted by အာဂ on Oct 20, 2010 in Creative Writing, Know-How, DIY, Short Story | 17 comments
“သေသောသူသည် သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားသေသည်” ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဦးကျော်သူတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ စာရွက်မှာတော့ “သေသောသူသည် သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားသင့်သည်” လို့ ရေးထားပါတယ်။ တစ်ကြောင်း တစ်ဂါထာ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း (သို့မဟုတ်) တစ်လုံး တစ်ပုဒ်၊ တစ်ပုဒ် တစ်လုံးတည်း လို့ပြောရမယ့် ရှားရှားပါးပါးစာပိုဒ် လေးတွေကို စုဆောင်းမိသလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ အသံထွက်ရွတ်ဖတ်လျှင် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုသို့မဖတ်ခင် ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ငယ်ထိပ်၊ မျက်စိ၊ လျှာ စသည်တို့ကို ပရုတ်ဆီပွတ်ထားပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
သေသောသူသည် သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားသေသင့်သည်။
ကုက္ကိုင်းက ကျော်ကျော်က ကြိုးကြိုးကုပ်ကုပ် ကျိုးကျိုးကျွန်ကျွန်ကွ၊ ကိုင်းကုန်ကို ကုန်းကြောင်းကကူး၊ ကုတ်ကုတ်ကျစ်ကျစ်ကယ်။
ကိုကိုးကျွန်းက ကိုကိုကြီး ကုက္ကိုကိုင်းကို ကောင်းကောင်းကိုင်ကာ ကောင်းကင်က ကြယ်ကြီးကို ကောင်းကောင်းကြည့်။ ကုက္ကိုကိုင်းကျိုးကျ၊ ကိုကိုကြီး ကုန်းကွကွ။
ကျွဲကြီးကိုးကောင်ကို ကျားကြီးကိုးကောင်က ကြမ်းကြမ်းကျုတ်ကျုတ် ကိုက်ကြ။
ကုက္ကိုင်းက ကိုကြီးကျော် ကျောကုန်းကို ကြောင်ကြီးကကုတ်၊ ကြောင်ကြီးကို ကိုကြီးကျော်က ကုက္ကိုကိုင်းကြီးကိုင်ကာ ကန်၊ ကြောင်ကြီးကကုတ် ကိုကြီးကျော်ကကန်၊ ကုတ်ကြ ကန်ကြ … ကြောင်ကြီး ကြောင်ကျကျ၊ ကိုကြီးကျော် ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် ကြေကြေကွဲကွဲ ကြည့်ကာကျန်။
ခင်ခင် ခုချက်ချင်း ခွေးခြေချ၊ ချိုချဉ်ချ၊ ခွက်ခြောက်ခွက်ခင်း။
စောစောစီးစီး စဉ်းစဉ်းစားစား စေ့စေ့စပ်စပ် စီစဉ်စမ်း၊ စိတ် စဉ်စစ်စေစား၊ စုစုစည်းစည်း၊ စူးစူးစိုက်စိုက် စီစဉ်စမ်း။
တည်တည်တံ့တံ့ တွေးတောတတ်တဲ့ တို့တစ်တွေ တောတွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုး၊ တောင်တွေ တတိတတိတက်တုန်း၊ တိမ်တောင် တောက်တောက်တွေ၊ တောက်တာတောတွေ၊ တော်တော် တောင့်တင်းတဲ့ တုံးတံတားတွေ၊ တိုင်တိုတိုတွေ၊ တောတဲတွေ၊ တစ်တောင်တိတိ တိုင်းတာတူးတဲ့ တွင်းတိမ်တိမ်တွေ၊ တီတွန့်တွန့်တက်တက်တွေ၊ တမ်းတမ်းတတ တီတီတာတာ တတွတ်တွတ် တွန်တတ်တဲ့ တစ်တီတူးတွေ၊ တွယ်တက်တတ်တဲ့ တက်တူတွေ၊ တောက်တဲ့တုတ်တုတ်တွေ၊ တောတွေ့ တောင်တွေ့ တော်တော်တွေ့တယ်။ တောက်တီးတောက်တဲ့တော်…။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပီပါပုံးပွင့် ပေါပေါပဲပဲ ပို့ပေးပါ။
ပဲပင်ပေါက်၊ ပဲပြား၊ ပဲပြုတ်၊ ပူပူပြဲပြဲပြုတ်ပေးပါ﻿။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြု၊ ပေါပျက်ပျက်ပြော၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး ပြုံးပြီး… ပေါပေါပျော်ပျော် ပြုံးပြုံးပျော်ပျော် ပြန်ပါ။ ပေါပါ ပျက်ပါ ပြုံးပါ ပျော်ပါ… ပြုံးပျော်ပေါ့ပါး ပြုပြင်ပြီးပြန်ပါ။
ဖိုးဖိုး… ဖေဖေ့ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖွားဖွားဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ `ဖြိုးဖြိုး´ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ဖြေးဖြေးဖျော်ဖိုးဖိုး။
ဖွားဖွားဖင် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖိုးဖိုးဖွဖွဖက်။
မောင်မောင်မြန်မြန်မောင်း မိုးမိုးမေမြို့မှာ မိုးမိမယ်﻿။
မောင်မောင်မြင့် မင်းမိန်းမ မေမြို့မှာ မိုးမိမယ် မင်း မြန်မြန်မောင်း﻿။
ရောင်းရင်းရေ၊ ရှောက်ရွက်ရောင်းရင်း၊ ရဲရင့်ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့ရှိ ရိုးရိုး ရေရရှိရေးရုံး ရောက်ရင်၊ ရိုးရိုးရေ`ရာရှင်´ ရှောရှောရှုရှူရရင်၊ ရေရော ရှောက်ရွက် ရောရွက်ရောင်းရန် ရည်ရွယ်ရင့်ရော ရှင့်`ရာရှင်´။
(မှတ်ချက်။ ရာရှင် = Ration)
လာလေ.. လာလေ.. လုပ်လို့။
လေးလေးလည်း လည်လည် လိုက်လို့လာ..။
လာ၊ လာလေ…လုပ်လွန်းလို့ လေးလေးလေ လက်လည်း လွန်.. လက်လည်း လန်.. လန့်လည်း လန့်.. လန်းလည်း လန်းလာ..။
လေးလေးလည်း လုပ်လေ လုပ်လေ လက်လွန်လေ.. လက်လွန်လိုက် လက်လန်လိုက် လုပ်လိုက် လာလိုက်..။
လူလေး လုပ်လိုက်လို့ လေးလေးလေ လန့်လည်း လန့်..၊ လန်းလည်း လန်း..။ လန့်လေ လုပ်လေ လန်းလာလေ..။
လာလေ လာလေ.. လုပ်လိုက်လေ.. လာလည်းလုပ် လန်းလည်းလုပ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်..။
လူလေးလုပ်လို့ လေးလေး လုံးလည်လိုက်..။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့… “လျှာလည်လွန်းလို့ လူးလိမ့်လျှင်လည်း လှည်းလေးလို၊ လိပ်လေးလို လေးလေးလံလံ လှိမ့်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြည်းဖြည်းဖတ် ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွား” တို့လို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
မှတ်ချက်။ ။ ဟန်သစ်ငြိမ် ဘလော့မှဖြစ်သည်။ ပှိုင့်ရချင်လို့မဟုတ်ပါ..။ ဒီက သူငယ်ချင်းတွေ အပျင်းပြေစေချင်လို့ပါ။
ပါးတောင်တော်တော်ညောင်းသွားတယ် … ဟီးဟီး
ပို့စ်တင်ခရချင်လို့ မဟုတ်ပဲ ပျော်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘာသာဆို ဘယ်သွားရှာဖတ်ဖြစ်ပါ့မလဲ ။
ကျေးဇူးပါပဲ အိတုန်ရေ…. တင်လည်းတင်ချင် အပြောခံရမှာလည်းကြောက်ကြောက် နဲ့ဆိုတော့လေ..။ အမှန်က ပျော်စေချင်တာ တစ်ခုတည်းပါ.။
အမငီး.. ပါးစပ်ညောင်း လျှာကိုက်နဲ့.. ဖတ်သမျှထဲမှာ ဒီပို့အနာကျဉ်ဆုံးပဲ… အရမ်းကောင်းပါတယ်.. အခုလို တစ်စုတစ်စည်းထဲဖတ်ရတာ…
တည်တည်တံ့တံ့ တွေးတောတတ်တဲ့ (၁)တို့တစ်တွေ (၂)တောတွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုး၊ တောင်တွေ တတိတတိတက်တုန်း၊ တိမ်တောင် တောက်တောက်တွေ၊ တောက်တာတောတွေ၊ တော်တော် တောင့်တင်းတဲ့ တုံးတံတားတွေ၊ တိုင်တိုတိုတွေ၊ တောတဲတွေ၊ တစ်တောင်တိတိ တိုင်းတာတူးတဲ့ တွင်းတိမ်တိမ်တွေ၊ တီတွန့်တွန့်တက်တက်တွေ၊ တမ်းတမ်းတတ တီတီတာတာ တတွတ်တွတ် တွန်တတ်တဲ့ တစ်တီတူးတွေ၊ တွယ်တက်တတ်တဲ့ တက်တူတွေ၊ တောက်တဲ့တုတ်တုတ်တွေ၊ တောတွေ့ တောင်တွေ့ တော်တော်တွေ့တယ်။ တောက်တီးတောက်တဲ့တော်…။
(၁)တတွဲတွဲ တွဲတဲ့ တာတေ
၁)ရွံ့ ပေါ်ရှဉ့်ပြေး ရှဉ့်မွှေးရွံ့ မလူး
၂)တုံးအောက်ကဖား၊ ပြားတဲ့ဖားကပြား၊ ဖေါင်းတဲ့ဖားကဖေါင်း၊ ဖားဖေါင်း၊ ဖားပြား
၃) တောင်ပေါ်ကရှမ်းကလေး၊ လျှော်ထမ်းလို့လာ၊ ရှည်တဲ့လျှော်ကရှည်၊တိုတဲ့လျှော်ကတို၊ လျှော်တိုလျှော်ရှည်
Tonari no kyaku wa yoku kaki ku kyaku da!
ဘီလူးကတုံးနှစ်ကောင် ဒူးနှစ်လုံးထောင် ဒူးနှစ်လုံးထောင် ဘီလူးကတုံးနှစ်ကောင်
ကဲ… အဲတာ ဘယ်လိုဖြတ်တောက် ဖတ်မလဲ…
က ကရင်.. က ပါ ကရင်၊ ကရင် က မ က ရင်…ကရင်မနဲ့တိုင်ပြောမယ်…
ဒါနဲ. စကားမစပ် ……….
ငယ်ထိပ်ကို ပရုတ်ဆီလိမ်းတာတော့ ဟုတ်ပါပီ
မျက်စိ နဲ. လျှာ ကို ဘယ်လိုလိမ်းရမလဲ ဟ R Ga ရ
ဒီစာကိုရော… ဘယ်လို ဖြတ်တောက်ဖတ်မလဲကွယ်… ဥာဏ်စမ်းတာ ဟုတ်ဘူးနော်…
တစ်ဗျတ ဟော ဗျတ မသိတော့ဘူးးးးးးးးးးး(
တ ၀မ်းပူဗျ တ ၀မ်းပူ ဟောဗျ တ ၀မ်းပူ
ကဲကဲ..ကင်းကိုကြီးကျော်ကြိုက် ကြောင်ကြောင်ကျားကျား ကိုကိုကြောင်ကြီးကို ကောင်းကောင်းကိုးကွယ်က ကံကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကောင်းကုန်ကာ ကျော်ကျော်ကြားကြား ကော့ကန်ကားကြ။
ကုက္ကိုင်းက ကြင်ကြင်ကြူ့ ကြက်ကင်ကို ကိုးကိုးကျွန်းက ကြောင်ကံကောင်းကြီးကကိုက်၊ ကြောင်ကြီးကို ကင်းကိုကြီးကျော်က ကုက္ကိုကိုင်းကြီးကိုင်ကာ ကျုံးကန်၊ ကိုကြီးကျော် ကျောကုန်းကို ကြောင်ကြီးက ကျားကုတ်ကုတ် ကောင်းကောင်းကြမ်း၊ ကိုကြီးကျော်က ကြောင်ကြောင်ကျားကျား ကျွဲကြိမ်းကြိမ်း၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကုတ်ကြ ကန်ကြ … ကြောင်ကြီး ကျိုင်းကောင်က ကကာ ကျော်ကျော်ကြားကြား ကြောင်ကျကျ၊ ကြင်ကြင်ကြူကကြိုက်ကာ ကြက်ကင်ကို ကောက်ကိုင်ကာ ကြောင်ကြီးကို ကိုးကွယ်ကုန်းကပ်၊ ကိုကြီးကျော် ကြွက်ကြောက်ကြောက်ကာ ကိုကျင်ကြိုင့် ကျောက်ကျော ကုန်ကားကြီးကို ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် ကြေကြေကွဲကွဲ ကြည့်ကာကျန်။ ကဲကဲ..ကောင်းကောင်းကူးကြ။
ရီလိုက်ရတာ ဖက်ဖက်မော ရင်ဘက် နောက်က ကျော…..အမလေး ရေတစ်ခွက်လောက်ပါဗျာ။